Android နဲ့ Hacking လုပျရာမှာ အကောငျးဆုံး Framework (Tool) တဈခုဖွဈလာတဲ့ ANDRAX - Khit Minnyo
ဆောင်းပါး Android နဲ့ Hacking လုပျရာမှာ အကောငျးဆုံး Framework (Tool) တဈခုဖွဈလာတဲ့ ANDRAX
by KhitMinnyo on January 09, 2019 in Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking with Android, ဆောင်းပါး
Click Here to change Font
Termux နဲ့ Hacking လေ့လာနေကြသူတွေ များလာတာကြောင့် Android နဲ့ လေ့လာချင်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ Article လေး ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါကို ရေးသင့် မရေးသင့် စဉ်းစားမိတာ နှစ်လလောက်ကြာသွားပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဖုန်းနဲ့လေ့လာသူတွေအတွက် မျက်စိထိခိုက်စေမှု ပိုများတာကြောင့် မရေးဘဲထားတာ ကောင်းမယ်တွေးပြီး မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းနဲ့ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေတော့တာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းနဲ့ လေ့လာတာကို အားမပေးပါ။ လေ့လာရင်လည်း သတိထားလေ့လာကြပါ။ မျက်စိနှစ်လုံးသည် ကျွန်တော်တို့ ဘဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝတစ်ဝက်​ရော ဘဝတစ်ခုလုံးပါ မဆုံးစေလိုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပြူးပြဲလေ့လာမည့်သူ ဒုနဲ့ဒေး ရှိလာနေတာကြောင့် ဒါလေးရေးတင်ဖြစ်ပါတယ်။
Andrax ဆိုတာ ဘာလဲ?
Andrax ဆိုတာ ဘာရယ်လို့ မပြောခင်မှာ Termux ဆိုတာ ဘာလဲလို့ အရင်ဆုံး ပြောပြချင်ပါတယ်။ Termux ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပြီးသားပါ။ Termux ဆိုတာ Linux command တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ဖုန်းတွေပေါ်မှာ သုံးနိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ ကြားခံ Application တစ်ခုပါ။
Andrax သည်လည်း Termux ကဲ့သို့သော App တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Andrax ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က "Don't be evil but beaCRACKER!" ဖြစ်ပါတယ်။
ANDRAX ဆိုတာ Android ဖုန်းတွေအတွက် အထူးဖန်တီးထားတဲ့ Penetration testing platform တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Common Linux Distro တွေထက် Hacking ပိုင်းမှာ ပိုအားသာတာ တွေ့ရပါမယ်။
Andrax ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေအတွက် 8.9.2016 မှာ စတင် ဖနိတီးခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တမ်း ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်လာတဲ့ 5.10.2018 မှ international မှာ public ချပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ANDRAX ကို ဖန်တီးခဲ့သူကတော့ The Cracker Technology - Advanced Pentest မှ Weidsom Nascimentoဖြစ်ပါတယ်။
ANDRAX ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ပြောရရင်
Andrax ရဲ့ အဓိက အားသာချက်တွေကို ပြောရရင် Portable ဖြစ်မှုကို အရင်ဆုံး ပြောရပါမယ်။ Android Version5အထက်ရှိတဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် က Open Source ဖြစ်တာပါ။ ဒါကလည်း system ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးမြင့်လာစေနိုင်တဲ့ အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
Hardware Source တွေကို အများကြီး မသုံးစေဖို့အတွက် Optimization လည်း အတော့်ကို ကောင်းတာ တွေ့ရပါမယ်။
Andraxmulator အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Emulation မဟုတ်ပါ။ ANDRAX is an evolution!
5.More than 200 tools
Hacking, Cracking နဲ့ Penetration Testing အတွက် Advanced Tool ပေါင်း နှစ်ရာကျော် ပါဝင်နေတာကလည်း Andrax ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။
6. Over 1000 attacks
Andrax နဲ့ Attack Type တစ်ထောင်ကျော် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Andrax VS Kali's NetHunter
Kali NetHunter က chroot နဲ့ run နေတဲ့ Debian Emulator ပဲ ဖြစ်တာမို့ Penetration Testing (or) Hacking ပိုင်းမှာတော့ Andrax က အပြတ်အသတ် သာမှာ ငြင်းဆိုစရာမရှိပါဘူး။ (Kali Linux နှင့် နှိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ)
Andrax Vs Termux
Termux က Penetration Testing Platform မဟုတ်ပါဘူး။ Debian Based tool တွေလောက်ကို ထည့်သွင်းသုံးနိုင်တာမျိုးဖန်တီးပေးတာပါ။ ဒီတော့ကာ Penetration Testing ပိုင်းမှာတော့ Termux အနေနဲ့ Andrax ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
Andrax ရဲ့ Official Site မှာကိုက အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းချင်သူတွေ အောက်အထိ ဆက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ (Eng လိုတွေ မဖတ်ချင်ရင် ကျော်ချလိုက်ပါ)
Termux is notapenetration testing platform, it's software to bring basic tools found inaDebian environment.
ဒီတော့ Termux က တကယ်တမ်း Advanced Tool တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်လို့ရအောင် လုပ်လို့ရပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျသွားပါတယ်။
Andrax ကတော့ ပိုပြီး Powerful ဖြစ်သလို Adnanced Tool တွေနဲ့လည်း ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလေးတွေ တစ်ချက် ရှိုးကြည့်ပါ။ အလန်းတွေ မြင်ရပါလိမ့်မယ် 😁
Main Menu of ANDRAX
Termux မှာ Andrax ထက် ပိုသာတဲ့တစ်ချက်တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက root မရှိလည်း လုပ်လို့ရနေခြင်း ဖြစ်ပြီးတော့ ANDRAX မှာတော့ root လိုပါတယ်။
Root privileges ကို သုံးမထားဘဲ run နိုင်ခြင်းက Advanced Tool တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ခက်ခဲစေပါတယ်။
Hacking တွေ၊ Cracking တွေတောင် လုပ်မှာပဲ ကိုယ့်ဖုန်းလေးတော့ root ရအောင် အရင်ကြိုးစားပေါ့ နော 😁
Click Here To Download ANDRAX
Termux နဲ့ Hacking လလေ့ာနကွေသူတှေ မြားလာတာကွောငျ့ Android နဲ့ လလေ့ာခငျြသူတှေ အဆငျပွအေောငျ ရညျရှယျပွီး ဒီ Article လေး ရေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တကယျတော့ ဒါကို ရေးသငျ့ မရေးသငျ့ စဉျးစားမိတာ နှဈလလောကျကွာသှားပါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ဖုနျးနဲ့လလေ့ာသူတှအေတှကျ မကျြစိထိခိုကျစမှေု ပိုမြားတာကွောငျ့ မရေးဘဲထားတာ ကောငျးမယျတှေးပွီး မရေးဖွဈခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဖုနျးနဲ့ ကွညျ့ရတာ အဆငျမပွတေော့တာလညျး ပါပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးနဲ့ လလေ့ာတာကို အားမပေးပါ။ လလေ့ာရငျလညျး သတိထားလလေ့ာကွပါ။ မကျြစိနှဈလုံးသညျ ကြှနျတျောတို့ ဘဝ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝတဈဝကျရော ဘဝတဈခုလုံးပါ မဆုံးစလေိုပါ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ ပွူးပွဲလလေ့ာမညျ့သူ ဒုနဲ့ဒေး ရှိလာနတောကွောငျ့ ဒါလေးရေးတငျဖွဈပါတယျ။
Andrax ဆိုတာ ဘာရယျလို့ မပွောခငျမှာ Termux ဆိုတာ ဘာလဲလို့ အရငျဆုံး ပွောပွခငျြပါတယျ။ Termux ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့အားလုံး သိပွီးသားပါ။ Termux ဆိုတာ Linux command တှကေို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Android ဖုနျးတှပေျေါမှာ သုံးနိုငျအောငျ ကူညီပေးတဲ့ ကွားခံ Application တဈခုပါ။
Andrax သညျလညျး Termux ကဲ့သို့သော App တဈခု ဖွဈပါတယျ။
Andrax ရဲ့ ဆောငျပုဒျက "Don't be evil but beaCRACKER!" ဖွဈပါတယျ။
ANDRAX ဆိုတာ Android ဖုနျးတှအေတှကျ အထူးဖနျတီးထားတဲ့ Penetration testing platform တဈခု ဖွဈပါတယျ။ Common Linux Distro တှထေကျ Hacking ပိုငျးမှာ ပိုအားသာတာ တှရေ့ပါမယျ။
Andrax ကို ဘရာဇီးနိုငျငံသားတှအေတှကျ 8.9.2016 မှာ စတငျ ဖနိတီးခဲ့ကွတာပါ။ တကယျတမျး ကောငျးမှနျစှာ အသုံးပွုနိုငျပွီး အပွညျ့အဝ လုပျဆောငျနိုငျလာတဲ့ 5.10.2018 မှ international မှာ public ခပြွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ANDRAX ကို ဖနျတီးခဲ့သူကတော့ The Cracker Technology - Advanced Pentest မှ Weidsom Nascimentoဖွဈပါတယျ။
ANDRAX ရဲ့ အားသာခကျြတှကေို ပွောရရငျ
Andrax ရဲ့ အဓိက အားသာခကျြတှကေို ပွောရရငျ Portable ဖွဈမှုကို အရငျဆုံး ပွောရပါမယျ။ Android Version5အထကျရှိတဲ့ Android ဖုနျးတှမှော install လုပျနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခကျြ က Open Source ဖွဈတာပါ။ ဒါကလညျး system ရဲ့ လုံခွုံရေးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပိုမိုတိုးမွငျ့လာစနေိုငျတဲ့ အရေးပါတဲ့အခကျြတဈခု ဖွဈနပေါတယျ။
Hardware Source တှကေို အမြားကွီး မသုံးစဖေို့အတှကျ Optimization လညျး အတေျာ့ကို ကောငျးတာ တှရေ့ပါမယျ။
Andraxmulator အနနေဲ့ သုံးတဲ့ Emulation မဟုတျပါ။ ANDRAX is an evolution!
Hacking, Cracking နဲ့ Penetration Testing အတှကျ Advanced Tool ပေါငျး နှဈရာကြျော ပါဝငျနတောကလညျး Andrax ရဲ့ အားသာခကျြပါပဲ။
Andrax နဲ့ Attack Type တဈထောငျကြျော လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။
Kali NetHunter က chroot နဲ့ run နတေဲ့ Debian Emulator ပဲ ဖွဈတာမို့ Penetration Testing (or) Hacking ပိုငျးမှာတော့ Andrax က အပွတျအသတျ သာမှာ ငွငျးဆိုစရာမရှိပါဘူး။ (Kali Linux နှငျ့ နှိုငျးခွငျးမဟုတျပါ)
Termux က Penetration Testing Platform မဟုတျပါဘူး။ Debian Based tool တှလေောကျကို ထညျ့သှငျးသုံးနိုငျတာမြိုးဖနျတီးပေးတာပါ။ ဒီတော့ကာ Penetration Testing ပိုငျးမှာတော့ Termux အနနေဲ့ Andrax ရဲ့ ပွိုငျဘကျ ဖွဈမလာနိုငျပါဘူး။
Andrax ရဲ့ Official Site မှာကိုက အောကျပါအတိုငျး ရေးထားပါတယျ။
ဒေါငျးခငျြသူတှေ အောကျအထိ ဆကျဖတျစခေငျြပါတယျ။ (Eng လိုတှေ မဖတျခငျြရငျ ကြျောခလြိုကျပါ)
ဒီတော့ Termux က တကယျတမျး Advanced Tool တှနေဲ့ အလုပျလုပျရတော့မယျဆိုတဲ့အခါ မစှမျးဆောငျနိုငျတော့ပါဘူး။ စှမျးဆောငျလို့ရအောငျ လုပျလို့ရပမေယျ့ စှမျးဆောငျရညျ ကသြှားပါတယျ။
Andrax ကတော့ ပိုပွီး Powerful ဖွဈသလို Adnanced Tool တှနေဲ့လညျး ပိုအဆငျပွပေါတယျ။
သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျမှုလေးတှေ တဈခကျြ ရှိုးကွညျ့ပါ။ အလနျးတှေ မွငျရပါလိမျ့မယျ 😁
Termux မှာ Andrax ထကျ ပိုသာတဲ့တဈခကျြတော့ ရှိပါတယျ။ အဲဒါက root မရှိလညျး လုပျလို့ရနခွေငျး ဖွဈပွီးတော့ ANDRAX မှာတော့ root လိုပါတယျ။
Root privileges ကို သုံးမထားဘဲ run နိုငျခွငျးက Advanced Tool တှရေဲ့ လုပျဆောငျမှုကို ခကျခဲစပေါတယျ။
Hacking တှေ၊ Cracking တှတေောငျ လုပျမှာပဲ ကိုယျ့ဖုနျးလေးတော့ root ရအောငျ အရငျကွိုးစားပေါ့ နော 😁
By KhitMinnyo on January 09, 2019
Labels: Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking with Android, ဆောင်းပါး
Moe Kyaw Thu January 22, 2019 at 5:54 AM
Sout Chaw Gyi November 12, 2019 at 5:34 AM
Unknown May 28, 2020 at 7:26 PM
MMHK Myanmar Hacker June 18, 2020 at 5:33 AM
Unknown October 30, 2020 at 10:29 AM